Izinzuzo oatmeal ungakwazi ukukhuluma phakade. Lo mkhiqizo futhi pheshana emathunjini kuzole futhi umzimba amavithamini namaminerali ematisa. Ngaphezu kwalokho, oatmeal kunomphumela omuhle lesisu, ukukhulula ke kusukela accumulations ahlukahlukene ezingadingekile futhi iyingozi, okungukuthi, uba uhlobo "ibhulashi" ukuze umzimba.
Njengoba eyaziwayo, kunconywa ukudla iphalishi ngesidlo sasekuseni. Into ewusizo ekuseni ukwanelisa umzimba wakho futhi amnike amandla ukuba impumelelo entsha ngosuku. Kodwa ngaso sonke isikhathi isimo noma isifiso ukuma isikhathi eside ngesikhathi isitofu ukuchitha isikhathi esiyigugu on ukupheka iphalishi. Kulokhu, lo-microwave oven kuziwa kosizo Sebawoti. It kuzokuvumela microwave imizuzu embalwa ukwenza ukudla kwasekuseni okunomsoco okunempilo oatmeal.
Zikhona izindlela ezimbili eziyisisekelo. Okokuqala - oatmeal ku-microwave phezu kwamanzi. Lokhu kuzodinga:
150-200 amagremu-oatmeal (ama-oatmeal).
Ucezu ibhotela noju.
350 ml amanzi ashisayo.
Kasha Oat microwaved ukulungiselela kumele izigubhu ezikhethekile yenzelwe ukusetshenziswa ngokuqondile e ezifana ekhishini Imishini. Ungase futhi uthathe ingilazi endishini ezijulile, uma kungekho Cookware efanelekayo microwave. Ukuzumeka ukuthola isilinganiso esifanele wokudla futhi uthele amanzi abilayo.
Iphuzu elibalulekile. Uma ukupheka liphalishi okusanhlamvu, bangakwazi nje uthele endishini ukupheka. Uma iphalishi oat e-microwave oven ayovulelwa wayewenza iphuma oats (groats), ngaphambi kokuba ziphekwe kutuswa ukususa ngaphansi kwamanzi agobhozayo (njengoba senza ngaphambi ukupheka irayisi).
Engeza ushukela, ibhotela kanye ingcosana kasawoti. Beka kuhhavini imizuzu 12-15 iqolo, imizuzu 5 - ishq. Amandla - esiphezulu. Uma ukupheka phezu kwamanzi, awudingi ukuba bagcine inqubo. Amanzi - hhayi ubisi, ngeke abaleke. Sabeka liphalishi ku-microwave waya ushawa, ukuxubha amazinyo akho, nokunye. D.
Eyesibili inketho - oatmeal ubisi microwave. Ngenxa yalesi iresiphi, udinga:
4-6 wezipuni oatmeal.
A ingilazi yobisi ashisayo.
20 g we bhotela.
A isipuni uju kanye ezintathu wezipuni ushukela.
A usawoti kancane ukunambitha.
ukupheka indlela kakhulu efana zokuqala. Ekuqaleni, uthele ubisi ibe isidlo esikhethekile, bese uwa ishq elele. Kubalulekile ukuthi ketshezi lwabasibekela cishe ngokuphelele. Abanye besifazane belulekwa ukuba uthele ubisi ku ngisho isentimitha elilodwa ngenhla. Ready ezenziwe ukudla imizuzu emihlanu noma eyisithupha amandla eliphezulu kakhulu.
Ngemva liphalishi oat e-microwave oven usulungile, engeza isilinganiso esifanele ubumnandi (uju noma ushukela), usawoti kancane wafaka ucezu ibhotela. Uma wayefisa, isidlo kungenziwa ehlotshiswe izithelo ezomisiwe (omisiwe amabhilikosi omisiwe, asithena) noma amantongomane.
ibhulakufesi Okuningi nokwanelisayo. uthola uma ukupheka oatmeal nge ithanga. Yena bacebe kakhulu yi-keratin Vitamin T, siyindlala ezaziwayo. Ngaphezu kwalokho ithanga, ngokungafani izithelo ezomisiwe namantongomane, liwumkhiqizo-kilojoule amaningi. Futhi lokhu kungenye uphawu lokuhlanganisa sasekuseni enempilo.
Ukupheka mikhiqizo ziyadingeka:
eyikhulu amagremu ithanga.
4-5 wezipuni oatmeal.
A usawoti kancane.
Amanzi - 1 inkomishi.
Butter - ucezu mass mayelana amabili amagremu.
Inqubo ukupheka kanje. Okokuqala, kuyadingeka ukulungiselela ithanga, uthathe yizicucu amancane ngokuthi lingakanani 2 * 2cm. I ezincane ngiqume, ngcono ke iphekwe.
Beka ithanga oqoshiwe endishini for microwave, uthele kuya oatmeal bese egcwele ngenani elithandekayo ketshezi. Njengoba amanzi, kukhona umbono phakathi emizi washintsha. Abanye bathanda noma insima awugqinsi, ngakho belulekwa ukuba uthele ingilazi yamanzi ashisayo. Abanye bathanda noma insima uketshezi ngaphezulu ngakho-ke Kunconywa ukuba asebenzise amanzi kaningi njengokuthanda kwakho kubonakale kufaneleka, ngaphandle ecacisa imikhawulo ngqo iresiphi.
Ungakwazi nje uthela ushukela, futhi ungakwazi ukwengeza zonke izingxenye ezihlobene emva ukupheka. Ilungiselela iphalishi-microwave (iresiphi ithanga) cishe ezintathu imizuzu ngesikhathi namandla 800 Watts. Uma ngemva kwesikhathi ithanga hardish okwamanje, ungakwazi ukwengeza enye ngomzuzu.
Ukususa lokudlela aphume microwave, uhlanganise kahle bese ukubeka phezu ibhotela. Ungakwazi ushukela noma uju (uma akakwenzanga lokho lapho besanda kuqala sokulungiselela). Noma sebenzisa omisiwe, okuyinto uya kahle kokubili ithanga nge iphalishi.
Phakathi abathandi wokudla ekuseni futhi kukhona labo abakhetha ukwengeza oatmeal kanye nezithelo ezintsha. Kodwa uma ilungelo lokwenza: ekuqaleni noma esigabeni sokugcina ukupheka? abapheki abanolwazi belulekwa ukuba ungeze imikhiqizo okuhlobene amakhowe ekupheleni ukupheka. Banana, ikiwi, orange, umango, lihhabhula, pere - izithelo engeza ngakwesokudla ngaphambi kokukhonza. Oku-isidingo uthathe izingcezu ezincane.
Futhi oat iphalishi ku-microwave ngokuvumelana fresh Mint oluhlaza kanye amajikijolo, nge emhlabathini nesinamoni vanilla.
Kuyini Bun brioche
Jam compote of Ranetki
Ibhulakufesi Healthy - ushizi fritters
Esiphundu futhi unempilo isitshalo seqanda kubhakwa
Indlela ukupheka isidlo Pike kuhhavini?
"Lazy" pizza epanini. ukupheka zokupheka
LCD "Ipaki avenue": izithombe kanye nokubuyekeza
Paving: kokuphakama ingxenye
Ungadliwa izifundo inyama yesibili
Asidi i-hyaluronic lip: izibuyekezo, izithombe ngaphambi nangemva
Hunting ngezibhamu, eyaziwa kusukela ngekhulu leshumi nesithupha
Imoto air conditioning apharathasi
Ubukhulu kwebele zesifazane: kanjani ukuqonda?
Cosmonaut Training Centre. . Yu A. gagarina: ikheli, izithombe